Baolina kitra - «CAN 2021» :: Nahemotry ny CAF ny lalaon’ ny Barea sy Elefanta • AoRaha
Baolina kitra – «CAN 2021» Nahemotry ny CAF ny lalaon’ ny Barea sy Elefanta
Niverina tamin’ny fanapahan-keviny ny Kaonfederasiona afrikana misahana ny baolina kitra (CAF). Nivoaka, omaly takariva, ny fanambaran’ity rafitra misahana ny taranja baolina kitra aty Afrika ity amin’ny fanafo­a­nana ny andro fahatelo sy fahefatra amin’ny fikatsahana tapakilan’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny CAN 2021, amin’ny 25 hatramin’ ny 31 marsa ho avy izao.
Isan’ireo tafiditra ao ana­tin’ izany ny fihaonana eo amin’ ny Barean’i Madagasikara sy ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, tokony hatao amin’ny 27 sy 31 marsa ho avy izao any Abidjan sy Madagasikara. “Noho ny ahiahin’ireo firenena maro mandray anjara amin’io hetsika io antony nahatonga ny CAF handray izao fanapahan-kevitra izao”, hoy ny fanambaràna avy amin’ny CAF.
Mbola tsy voafaritra anefa ny fotoana hanemorana an’ ireo lalao rehetra tokony hatao. Vao omaly ny mini­sitry ny Tanora sy ny fanatanjahantena, Tinoka Roberto, no nanao fanambaràna tao amin’ny pejin’ny tambajotra sosialiny, “Facebook”, fa: “manaiky izay voalazan’ ny CAF tamin’ny fitazonana ny datin’ny fifaninanana”.
Nanaitra ny maro ny efa nihanahan’ity tsimok’aretina “Covid-19” tamin’ireo atleta maro maneran-tany. Nanomboka tamin’i King Udoh, mpilalao baolina kitra nizeriana mizaka ny zom-pirenena italiana ao amin’ny klioban’ ny US Pianese (Série C Italia), ny fahafantarana fa misy mpanao fanatanjahantena tratran’io areti-mifindra io. Na izany aza anefa dia tsy misy ireo voalaza fa namoy ny ainy tamin’ireo atleta narary.
Ankoatra azy dia voamarina ihany koa fa misy mitondra ny tsimok’aretina “Covid-19” ny mpilalao iray ao amin’ny klioban’ny Linfield (Irlande) ilalaovan’ilay mpilalao iraisam-pirenena malagasy Hery Bastien. Tamin’ny alakamisy lasa teo no fantatra fa mararin’ ny “Coronavirus” ilay vodilaharan’ny Juventus (Italia), Danielle Rugani. Voatery niditra an-tsitrapo, arahi-maso akaiky momba ny fahasalamany any Portugal, i Cristiano Ronaldo, mpiara-milalao aminy. Any Angletera, mitondra ny tsimok’aretina ihany koa i Mikel Arteta, mpanazatra ny ekipan’ny Arsenal, sy ilay mpilalaon’ny Chelsea, Callum Hudson-Odoi. Na izany aza anefa, mbola tsy misy ireo atleta mifaninana aty Afrika mitondra ny tsimok’aretina Covid-19, na dia efa miisa dimy ambin’ny folo aza ireo firenena ahitana izany: Ejipta (59: 1 maty), Alze­ria (20: 2 maty), Afrika Atsimo (7), Sénégal (10: 2 sitrana), Tonizia (2), Caméroun (2), Nizeria (2), Ghana (2), Togo (1), RD Congo (1), Côte d’Ivoire (1), Gabon (1) ary Kenya (1).
Niato avokoa ireo fifaninanam-pirenena
Samy nampiato ny fiadiana ny ho tompondakany avy ireo firenena eoropeana, indrindra amin’ny taranja baolina kitra. Nanomboka tamin’ny filalaovana tsy nisy mpijery izany tany Italia ary niafara tamin’ny fampiatoana. Toy izany ihany koa, niato nanomboka tamin’ity herinandro ity ny fifaninanam-pirenena any Frantsa (Ligue 1), Angletera (Premier League), Espana (Liga) ary Alemana (Bundesliga). Nandray fepetra ny hampihemotra an’ireo datin’ny fifaninanana kaontinantaly (UEFA Champions League sy Europa League) ihany koa ny Kaonfederasionan’ny baolina kitra any Eoropa. Mbola hivory izy ireo, amin’ny talata ho avy izao, hahafantarana izay tena fanapahan-kevitra.
Lalaon’ny oniversite Ankatso Voahilika ireo sekoly ambony tsy miankina
Fitazonana datim-pifaninanana :: Narehitra tsy nisy mpanatrika ny Afo olympika
Kitra – « Orange Pro League » :: Voatanan’ny FCA Ilakaka sahala ny Fosa Juniors